Ny lalao fananganana dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Lalao Android, Tutorials
Misy karazany maro ny lalao azo alaina amin'ny Android. Midika izany fa ny mpampiasa Android rehetra saika afaka mahita lalao araka ny itiavany azy. Karazan-karazany efa hatry ny ela ary malaza eo amin'ireo mpampiasa, io no lalao fanamboarana. Lalao izay tokony hanorenantsika ny tanànantsika manokana.
Amin'izao fotoana izao dia afaka mahita ny sasany amin'ireo lalao ireo isika ao amin'ny Play Store. Avy amin'ny zavatra toa mpampiasa maro no sarotra ny fifantenana. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, nanao safidy tamin'ny lalao fananganana tsara indrindra ho an'ny Android izahay. Lalao inona avy no nahatonga an'io lisitra io?
Ny ankamaroan'ny lalao amin'ity lisitra ity dia fantatry ny mpampiasa. Tsy ho gaga ianao raha mahita ny sasany. Saingy, izy rehetra ireo no mahaliana indrindra azontsika jerena amin'ity sokajy lalao fananganana ity.
3 Tanànan'ny tanàna 4 Sim Town
5 2020: Ny fireneko
Iray amin'ireo lalao fananganana malaza indrindra sy malaza ho an'ny Android. Misy fisintomana izay efa mihoatra ny 10 tapitrisa. Ka tsy isalasalana fa safidy malaza be eo amin'ireo mpampiasa izany. Amin'ny lalao dia ho afaka isika mamorona ny tanànantsika manokana ary manamboatra fotodrafitrasa lehibe manandanja ihany koa ho an'ny mitovy amin'ny seranam-piaramanidina na gara. Hikarakara ny volanao koa izahay. Ka tsy maintsy mahazo ilay mandeha tsara ny tanàna ary mitombo amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia ao anatiny aza dia mahita fividianana isika.
Megapolis Amboary ny tanàna nofinofisinao!
Developer: Social atsangana hitondra Ltd
Ny lalao SimCity dia fantatra manerantany. Samy amin'ny fitaovana Android sy solosaina. Izy ireo no lalao fananganana tanàna mahazatra indrindra azontsika jerena. Na dia mandefa kinova vaovao aza ry zareo. Tsy niova firy ny fandidiana raha oharina amin'ny fanaterana hafa. Tsy maintsy mamorona ny tanànantsika manokana isika ary miasa toy ny ben'ny tanàna. Ka tsy maintsy ataontsika izay hahalavorary ny zava-drehetra, azo antoka ary sambatra ny olona.
Maimaimpoana ny fampidinana ity lalao fananganana ho an'ny Android ity. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Tanànan'ny tanàna 4 Sim Town
Saga iray hafa izay mankafy ny lazan'ny mpampiasa ny rafitra miasa Google. Ny mampiavaka ity lalao ity dia ny tsy maintsy ataontsika manangana tanàna nosy misy antsika. Ka io fizotran-javatra io dia manana olana fanampiny. Saingy, raha tsy izany, tsy lavitra ny lalao hafa amin'ity karazana ity. Tsy misy isalasalana, ny maha-Nosy hafakely azy dia manome azy fikitihana manokana.
City Island 4 - Simulation ao an-tanàna: mpanao trano
Developer: Fikambanana Sparkling - Manaova lalao Lapan'ny tanàna
Hafa mihitsy ity lalao ity. Araka ny tafahitsoka tao anaty hantsana andrefana izahay. Noho izany dia mila manangana tanàna vaovao eto amin'ity toerana ity isika. Hafa tanteraka noho izany ny fomba fananganana sy ny toerana fananganana amin'ity indray mitoraka ity. Inona koa, tsy maintsy mitady harena sarobidy ihany koa isika amin'ny lalao. Noho izany dia manana fiasa fanampiny tena mahaliana izy io. Ianao koa tsy maintsy asongadino ireo sary, izay mampiavaka azy amin'ny lalao hafa ao anaty lisitra.
2020: Ny fireneko
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ity lohateny ity izay an'ny saga fanta-daza ihany koa. Ny andraikitsika amin'ity tranga ity dia ny fananganana sy fitantanana tanàna amin'ny ho avy. Ka, voalohany indrindra, ny tena misongadina indrindra dia ny firafitra sy ny sary amin'ny lalao. Satria maka tahaka tsara izy ireo izay ho tanàna lehibe amin'ny ho avy. Hihaona ihany koa isika iraka isan-karazany izay tsy maintsy ataontsika mba handrosoana. Ny tena tanjona dia ny handroso sy hivoatra ny tanàna.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia ao anatiny aza, toy ireo tranga teo aloha, dia mahita fividianana sy dokam-barotra izahay.
Developer: Lalao Insight Classics
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao fananganana tsara indrindra ho an'ny Android
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Google Drive for Android